Nagu saabsan - Fuzhou Huaguang Color Daabacaadda Co., Ltd.
Fuzhou Huaguang Color Daabacaadda Co., Ltd. waa warshad xirfad daabacaadda & baakadaha leh khibrad 20 sano ah. Ku takhasusay soo saarista sumadda tayada sare leh, sanduuqa hadiyadaha, sanduuqa keydinta waraaqaha, sanduuqa PVC, boorsada waraaqda. Waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawinno wax kasta oo naqshadeynta illaa taageerada farsamada ah.
Shirkaddu waa shirkad mas'uuliyadeed xaddidan oo gaar loo leeyahay, inta badanna shirkadaha wax soo saarka dhexe iyo kuwa sare ee gobolka iyo Yurub, Mareykan, shirkadaha wax soo iibsiga Japan ee Shiinaha oo taageeraya alaab-qeybiyeyaasha lana aasaasay.
Shirkaddu waxay u heellan tahay naqshadeynta iyo soo saaridda dhammaan noocyada sumadaha dhexe iyo kuwa sareba (oo ay ku jiraan calaamadaha ka hortagga been-abuurka ah), Kaararka aqoonsiga (oo ay ku jiraan KAARYADA caagga ah), sanduuqyada midabka, sanduuqyada hadiyadda adag, sanduuqyada wax lagu keydiyo, boorsooyinka gacanta.
Si loo hubiyo waqtiga iyo saxnaanta alaabada la siinayo macaamiisha, shirkaddu waxay si weyn u maalgashatay hibooyin iyo qalab, iyadoo diiradda saareysa geeddi-socodka cilmi-baarista iyo horumarinta, xakamaynta tayada, iyo hagaajinta hannaanka maaraynta dhaqanka iyo habka wax soo saarka. Hirgelinta waxsoosaarka qorshaysan iyo keydka qorshaysan ee badbaadada, si loo hubiyo in la bixiyo adeegyo qaybinta wakhti kasta iyo meel kasta, adeeg buuxa oo muddada cusub ah, guud ahaan, macaamiisha heer sare ah si loo xaqiijiyo fikradda maaraynta "eber eber" si ay iyagu wax ugu darsadaan, taasna ay u wanaajiso maareynta ganacsiga, maareynta wax soo saarka, maareynta wax soo iibsiga iyo qorsheynta maareynta bakhaarada iyo bixinta waxay gacan ka geysan kartaa yareynta kharashaadka hawlgalka.
Si macaamiisha loo siiyo adeeg wanaagsan iyo wax soo saar tayo sare leh.
Dadaallada, wanaagsan, kor u kaca, danaha gaarka ah, iskaashiga guul-guuleysiga.
Bilowga baaritaankaaga, shaqaale kasta oo kooxdayada ka mid ah wuxuu si adag u shaqeynayay inuu ku siiyo wax soo saar wanaagsan. Laga soo bilaabo weydiinta, oraahda, amarka, soo saarista, xakamaynta tayada, baakadaha, rarka iyo gaarsiinta kama dambaysta ah, iskuxira kasta wuxuu si taxaddar leh u hayaa.
Shirkaddu waxay u heellan tahay naqshadeynta iyo soo saaridda dhammaan noocyada sumadaha dhexe iyo kuwa sare (oo ay ku jiraan calaamadaha ka hortagga been-abuurka), kaararka aqoonsiga (oo ay ku jiraan kaararka finanka), sanduuqyada midabka, sanduuqyada hadiyadaha adag iyo boorsooyinka gacanta. Si loo hubiyo waqtiga, saxda iyo badbaadada alaabada la siiyo macaamiisha, shirkaddu waxay lacag badan gelisay hibooyin iyo qalab (soo bandhigida qalab casri ah oo dheellitiran oo UV ah oo midabkiisu yahay 6-midab leh iyo qalab wax soo saar sanduuqa hadiyadeed oo dhammaystiran). ku saabsan cilmi baarista iyo horumarka, soosaarka Seiko, xakamaynta tayada geedi socodka oo dhan, hagaajinta habka maaraynta dhaqanka iyo habka wax soo saarka.
Waxaan nahay warshad xirfad daabacaadda iyo baakadaha. Waxaan ku howlaneyn warshadan in ka badan 20 sano. Waxaad si buuxda u aammini kartaa in xooggeenna iyo sannado khibraddeennu ay naga caawin doonaan xallinta dhibaato kasta oo aad ka haysato alaabteenna. Haddii aad xiiseyneyso alaabadayada, fadlan si xor ah noogu soo dir email wixii su'aalo ah ee ku saabsan alaabteenna. Waan kuu soo jawaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan. Waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno.